एमाले मोरङले वडा कमिटी र पालिकाको अधिवेशन गर्ने | रेडियो झापा 100.7 MHz.
रेडियो झापा 100.7 MHz. आइतबार, आषाढ २७, २०७८ १३:३४:३९
विराटनगर, २६ असार । नेकपा एमाले मोरङले वडा कमिटी र पालिका कमिटीको अधिवेशन गर्ने भएको छ । एमाले मोरङले १५९ वटा वडा कमिटीमा भदौ ५ गते र १७ वटै पालिकामा भदौ १५ गते अधिवेशन गर्ने निर्णय गरिएको स्कुल विभाग प्रमुख रुपेश खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।